décembre | 2020 | InfoKmada
Tetikasa MIHARY : maro ireo efa nahita tombontsoa
InfoKmada - 21 décembre 2020 0
Nandray anjara tamin’ny famelabelaran-kevitra izay no tanterahina nandritra ny hetsika nokarakarain’ny FIOVA na fivondronan’ireo orinasa ao Vakinakaratra ny tetikasa Mihary ny asabotsy lasa teo . Tanjon’ny tetikasa Mihary ny fahafahan’ireo manana fahasembanana mandray anjara amin’ny fampandrosoana ny firenena.
Fanaovana tahona Brochettes : mamelona ankohonana iray ao Toamasina
Manavotra fianakaviana maro ny asa fanamboarana tahona brochette any toamasina any fa saingy ahiana ny nety hahalany tamingana ny volobe na ny bambou izay akora fototra ampiasain'ny mpamokatra noho ny fisian'ny dorotanety sy ny fandripahana ny ala misesisey tato ho ato izay. Mivelona amin’ny fanaovana tahona Brochette i Christian mianakavy. Ny mahakasika ny asany indray no entina aminao ato anatin’ity fanadihadiana manaraka ity.
Marotolana – Ambanja : rongony 6208 Kg sy menaka rongony 21 litatra sarona
Vokatry ny fanomezam-baovao avy amin’ny olon-tsotra, olona 04 mpisera rongony no voasambotry ny Zandary tao Mahadera, Kaominina Marotolana, Distrika Ambanja niaraka tamin’ny Rongony mihoatry ny 6 Taonina sy menaka rongony 21 Litatra. Ny fidorohana rongony izay isan'ny mampirongatra ny asan-jiolahy na Andrenivohitra na any amin’ny tontolo Ambanivohitra.
Ramena –Diego : miroso ary ho vita alohn’ny fotoana ny asa fanamboarana ny lalana
Miroso ny fanamboarana ny lalana Ramena Diego amin’izao fotoana ary misy ampahan-dalana efa vita manontolo araka ny fanazavan’ny tomponandraiktra any an-toerana. Ho vita alohan’ny 12 volana fetra voalaza hanamboarana ny lalana ny asa hoy ny Chef de Chantier.
Cannabis : voasokajy ho isan’ireo zava-mahadomelina azo hitsaboana
Nanapa-kevitra ny CND na ny Commission des Stupéfiants des Nations Unes fa azo itsaboana ary nesorina tamin’ireo zava-mahadomelina mampidi-doza ny Cannabis. Afaka mampiasa Cannabis sy ny menaka azo avy aminy ireo laboratoire hahafahana mamokatra fanafody, tahaka ny efa nitranga tamin’ny Morphine sy ny Opium.
Ady amin’ny fanaovana maloto an-kalamanjana : ny fanorenana foto-drafitr’asa no vahaolana
InfoKmada - 18 décembre 2020 0
Isan’ireo firenena manana taha ambony eo amin’ny fanaovana maloto an-kalamanjana I Madagasikara hoy ny firaisamonim-pirenena misehatra amin’ny fidiovana sy fanadiovana. Tokony hafainganina ny fanorenana foto-drafitr’asa mifanaraka amin’izany hoy izy ireo ary aorian’izay, hampiharana ny lalàna ireo rehetra tratra manao izany.
Fanombanana ny politikam-panjakana : antoka hahatratrarana ny vina napetraka
Tsy mbola tafiditra tao anatin’ny kolontsain’ny Malagasy ny fanombanana ny politikam-panjakana na ny évaluation des politiques publiques. Antoka iray ahatratrana ny vina napetraka anefa izany raha ny fanazavana.
Fitantanana ny valan-java-boahary : esorina ny tompon’andraikitra tsy mahomby
Tsy maintsy havaozina hifanaraka amin’ny tanjon’ny fampandrosoana maharitra ny fitantanana ny valanjavaboahary eto Madagasikara. Hapetraka mazava ny bokin’andraikitra hifehezana ny fitantanana. Isany hojerena manokana ny tamberim-bidy azo avy amin’ny valan-java-boahary izay mety hiafara amin’ny fanesorana ny tomponandraikitra tsy mahomby aorian’ny fanaovana tombana.
Fomba fiasan’ny Solombavambahoaka : mampametra-panontaniana ny maro
Tsy ampy ny fetr’isan’ireo Solombavambahoaka tonga teny anivon’ny Antenimierampirenena androany handray ny fanapahan-kevitra ny mahakasika ireo antontan-taratasy miisa 12, izay maha voasaringotra olona ambony teto amin’ny firenena, ho nanao kolikoly sy fanodikodinambolam-panjakana. Ankilany, efa tontosa ny asan’ny kaomisionina manokana raha ny nambran’ny filohany fa anjaran’ny fivoriambe azo atrehina sisa.
Famatsiam-bola ny tetezana – Mangoky : nankatoavin’ny loholona
Miroso ny dingana fanamboarana ny tetezana lava indrindra eto Madagasikara, mirefy 880m, izay haorina eo amin’ny Reniranon’i Mangoky. Lany androany teo anivon’ny antenimierandoholona ny volavolan-dalàna fankatoavana ny fampidiram-bola ny tetikasa ity. Ny taona ho avy arak’izany no hivoaka ny tolo-bidy ho an’ny orinasa izay handray ny asa.